Darawal Soomaali ah oo lagu tilmaamay Addoon Madow | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Darawal Soomaali ah oo lagu tilmaamay Addoon Madow
Sida lagu baahiyay wargeyska The Telegraph ee kasoo baxaya dalka Ingiriiska Ruux u dhashay dalka Qatar ayaa aflagaadeeyay darawalkiisa oo Soomaali ah, kuna tilmaamay Ey, Daanyeer iyo Addoon Madow ah.
Wargeyska ayaa daabacay in Diblumaasiga oo ah madaxa Caafimaadka ee Safaaradda Qatar ku leedahay dalka UK ayaa darawalkiisa oo Soomaaliya ah u muujiyay naceyb iyo Midab Takoor, waxaana la sheegay inuu ku tilmaamay inuu yahay Adduun Madow.
Darawalka oo ah Soomaali British laguna magacaabo Maxamuud Axmed ayaa dacweeyay diblomaasiga, waxaana la sheegay in kadib dacwadiisa Diblomaasiga uu ka codsaday in uu qaato £50,000 oo laaluush ah dacwaddana uu ka laabto.
Diblomaasiga u dhashay Qatar ayaa lagu magacaabaa Abdullah Ali Al-Ansari, waxaana ay is qabteen Maxamuud oo ahaa darawalkiisa, taasi oo xiisad dhalisay, waxaana Muwaadinka Soomaaliga ah shaqada laga joojiyay sanadkii 2013.
Maxamuud ayaa dhowr jeer isku dayay kiiskan in uu Maxkmadda geeyo, hayeeshee dhowr jeer ay ku celiyeen Maxkamadaha London ilaa maxkamadda racfaanka ay 2015kii amartay in kiiska la gali karo.
Darawalka ayaa ku dooday in intii u dhaxeysay 2007dii ilaa 2013kii uu dhowr jeer waxyeello jirka ah u geystay diblomaasigan markii dambana caay iyo shaqo ka eryid isugu daray.
Sheekada Axmed iyo Maxamuud ayaa hadda uun soo shaac baxday,waxaana Maxkamadaha Ingiriiska ay ku howllanyihiin sidii Maxamuud xaqiisa loogu dhicin lahaa.
Diblimaasiga u dhashay Qatar ayaa adeegsanaya qareenno sare, waxaana uu isku dayay in kiiskan uusan gaarin maxkamadda si hoosana loo dhameeyo.
Diblomaasiga ayaa darawal kale u soo dhiibay lacagta, Maxamuudna u oggolaaday in uu shaqada ku laabto, laakiin Maxamuud ayaa sheegay in uusan shaqada ku laabaneyn lacagtana qaadaneyn ilaa uu caddaalad ka helayo.
Diblomaasiga iyo safaaradda Qadar ee London ayaa diiday dhamaan eedahaas,waxaana ay Maxkamadda amartay in kiiskan uu sii socdo.